Abhimanyu Nirabi | Nepali Stories
Abhimanyu Nirabi – Saanghu
अभिमन्यु निरवी – साँघु
विवाहको दिन ऊ निराश देखिएकी थिई । गरगहना, रातो सारी, झिलमिल सितारा जडिएको घुम्टो ओढेर पनि ऊ खुलेकी थिइन । के के नपुगे जस्तो, कताकता के बिगि्रए जस्तो विवाहको वातावरण खल्लो खल्लो थियो उसको लागि । मनमा केवल पीडा र डरहरू मात्रै थिए । खुसीको एक चिम्टी पनि उसको अनुहारमा नदेखिएकोले आउने-जानेहरू मुखामुख गरेर हेर्थे । विवाह राजीखुसीले नभएको अड्कल काट्थे । हुन पनि त्यति लामो विवाहमा उसले एकपटक पनि बेहुलाको मुहार हेरिन । ऊ मौन रहेर एकोहोरो भएकी थिई । त्यसैले नजिकै बसेकी साथीले साउती गरेझैँ भनी, शान्ता के भो ? के गति बनाकी ? के भन्लान मान्छेले ? उसको कुरामा शान्ताले केही भनिन । बरु उल्टै पीडा भरिएको आँखाले उसलाई एकपटक हेरेर फेरि पहिलेकै मुद्रामा बसी ।
बिदाईको बेला आयो । शान्ताका आँखाहरू बिस्तारै रसाए । जीवनको बाइस वसन्तहरू बिताएको प्यारो घरको आँगन छाड्नुपर्दाको दुःख उसको रुवाइसँगै गुन्जियो । वातावरण स्तब्ध भयो । बाबाको पिठ्यूँमा बुई चढेर जग्गेमा बिदाईको अन्तिम फन्को घुमिरहँदा उसले सिँगै बालापन सम्भिmई । त्यतिबेला उसले ठानेकी थिई यो घर मेरो हो, म कैले कतै जान नपर्ला तर त्यो भएन, सोचाइहरू उल्टो भए । सदाको लागि घरलाई माइत बनाएर पराइ घरलाई आˆनो भन्न जाने दिन आयो । ऊ सम्झीसम्झी रोइ, घर, आँगन, बा, आमा………अनि दिललाई । उसको आँसु भेल बनेर गालाबाट तल बगे र भुइँमा झरे । उसले बाचा तोडेकी थिई । सँगै जिउने, सँगै मर्ने वाचा । यो बिदाईको अन्तिम घडीमा उसको पूरै शरीर काम्दै थियो । उसले दिललाई सम्झेर आँखा चिम्म गरी । दिलको प्यारो तस्बिरहरू उसको मानसपटलमा यताउता घुमिरहृयो । सँगै हिँडेका, सँगै बिताएका मीठा क्षणहरूले शान्ता रोमान्चित भई तर पलमै ऊ कल्पनाबाट यथार्थमा उत्री । रुवाइहरू फेरि विस्तारै बढ्यो । बाजाका धुनहरू ऊसँगै रुँदै थियो । त्यो क्षण विरक्त लाग्दो, दुःखदायी र पीडादायी बनेको थियो । अन्तिम बिदाईमा उसको साथीले घुम्टो खोलेर बिस्तारै भनी राम्ररी जा, नरोइकन जा, …., रुँदारुँदै शान्ताले भावुक भएर भनी, मैले जीवनको एउटा युद्ध हारेँ । त्यसैले बन्धक बनेर जाँदैछु । उसको कुराले साथीको मनमा चस्स छोयो । ऊ रुन पनि सकिन र हाँस्न पनि ।
विवाहको पहिलो रात उसले रोएर बिताइ । बाआमाको करले उसले एउटा अपरिचितसँग विवाह गरेकी थिई । उसले न त बाआमासँग झगडा नै गर्न सकी, न त कुनै स्पष्ट निर्णय नै । बाहिर पढिरहेकी उसलाई एक्कासि घरमा बोलाएर केही दिनको कुराकानीमै उसको विवाह भएको थियो । न त उसले दिललाई भन्न भ्याई न त धेरै साथीहरूलाई । उसले आफूले आफैँलाई धोकेबाज ठानी । हुन त ऊसले घरमा दिलको बारे कुरा गरेकी थिई तर परिवारको अगाडि ऊ टिक्न सकिन । जातीयताको पर्खालले उसको सारा सपनाहरू तुहायो । उसले तर्कबितर्क गर्न सकिन । फलस्वरूप जिन्दगीले उसलाई यो नमिठो घाउ दियो जुन अझै आलै थियो । तथापि उसले कसैलाई दोष दिइन । उसले जिन्दग्ाीको त्यो निर्णयलाई स्वीकारेर सोची “जिन्दगी एउटा सम्झौता हो, सम्झौता गरेरै बाँच्छु । ”
Posted in Abhimanyu Nirabi
Tagged Abhimanyu Nirabi - Saanghu Abhimanyu Nirabi's Nepali Story Saanghu Literary work of Nepali Story Writer Abhimanyu Nirabi Literatures of Nepali Story Writer Abhimanyu Nirabi Nepali Author Abhimanyu Nirabi Nepali Katha Nepali Katha Saanghu by Abhimanyu Nirabi Nepali Kathakar Nepali Kathakar Abhimanyu Nirabi Nepali Rachanakar Kathakar Abhimanyu Nirabi Nepali Sahitya Nepali Sahityakar Nepali Stories Nepali Stories By Abhimanyu Nirabi Nepali Stories Collection Nepali Stories Collection Of Abhimanyu Nirabi Nepali Story Nepali Story Blog Nepali Story Saanghu by Abhimanyu Nirabi Nepali Story Website Nepali Story Writer Nepali Story Writer Abhimanyu Nirabi Sahityakar Abhimanyu Nirabi Ka Nepali Katha Haru